Ungayilanda Kanjani iPhotomath ye-PC Mahhala (inguqulo yakamuva) | Izindaba zamagajethi
UPaco L Gutierrez | 08/02/2021 18:31 | Kubuyekezwe ku- 19/02/2021 18:42 | Android, General, Izifundiswa
I-PhotoMath isiyisithandwa Ithuluzi lomakhalekhukhwini bethu, ngalo singaxazulula noma iyiphi inkinga yezibalo sisebenzisa ikhamera yesikhungo sethu. Umthuthukisi wayo ubize uhlelo lokusebenza njenge-calculator yokuqala ngokususelwa kwikhamera, kepha kunalokho iyithuluzi elibaluleke kakhulu lokufundisa ekhaya, ngoba lingasiza kakhulu kubazali abafuna ukusiza izingane zabo ukuba zenze umsebenzi wasekhaya. Ngalesi sicelo simane sithathe isithombe se-equation futhi sisinikeza umphumela, kanye nemiyalo yokuwenza igxathu negxathu.
Kodwa, Ingabe lolu hlelo lokusebenza lungasetshenziswa kukhompyutha yethu? Yebo, yize kulokhu kufanele sisebenzise i-emulator ye-AndroidAkuyona inkinga kepha kungahle kungakhululeki kwabanye futhi kube nzima. Ilusizo ikakhulukazi kulabo abangafuni ukusondela kuselula yabo ngenkathi befunda noma besebenza. Ngaphandle kokungabaza, wonke umfundi noma umzali uzokuthokozela ukuba naleli thuluzi kumadivayisi amaningi ngangokunokwenzeka. Kulesi sihloko sizokukhombisa ukuthi ungayilanda kanjani i-PhotoMath kwi-PC yakho mahhala kunguqulo yayo yakamuva.
1 1. Landa i-Android Emulator ye-PC
2 2. Faka i-emulator ye-Android kwi-PC yethu noma kwi-MacOS.
3 3. Landa iPhotomath
4 Izinhlelo Zokuthakazelisa ze-Android Zokulingisa ku-PC
1. Landa i-Android Emulator ye-PC
Lolu hlelo lokusebenza luyatholakala ku-Android ngakho-ke kuzofanele silingise i-Android kwi-PC yethu, ngoba kunezinhlelo eziningi, kepha sizoncoma eyodwa ikakhulukazi, yiBluestacks. Ikona ngokungangabazeki uhlelo oluthandwa kakhulu lokulingisa lwe-Android, kepha futhi olusebenza kakhulu futhi olusebenzayo. Ngaphezu kokusebenza kakhulu, ukuyifaka kunenzuzo yokuthi uma sinenkinga, sizoba nezinkulungwane zezixazululo ngokuchofoza okukodwa kuwebhu.
Landa ama-Bluestacks kulesi sixhumanisi se-PC noma i-MAC.
Ungabheka lokhu kuhlanganiswa kwama-emulators we-Android esivele siwenzile ngaphambilini kuwebhu, kulesi sixhumanisi uma kwenzeka une-MacOS, noma kulokhu okunye uma kwenzeka une-Windows PC.
2. Faka i-emulator ye-Android kwi-PC yethu noma kwi-MacOS.
Ukufaka i-emulator ye-Bluestacks ilula kakhulu, kufanele nje sifinyelele iwebhusayithi yayo esemthethweni bese siqala ukulandaSizoyithola kufolda yokulanda yethimba lethu. Lapho ukulanda sekuqedile ngokuphelele, sizokhipha ifayili lokufaka bese siliqedela silandela yonke imiyalo, qaphela ukuthi ungafaki izengezo zesiphequluli noma wamukele noma yiluphi uhlobo lokukhangisa lwemeyili yethu.
3. Landa iPhotomath
Ukuba ne-emulator efakwe ngokuphelele kukhompyutha yethu, kufanele siyisebenzise futhi funa ibha yokusesha, kuyo sizobhala i-PhotoMath bese siyikhetha. Ukufinyelela esitolo sohlelo lokusebenza lweGoogle kuzovulwa futhi sizokhonjiswa thina eBluestacks. Kumele sicindezele inkinobho yokufaka njengoba besingayenza kunoma iyiphi iselula ye-Android.
Lapho ukufakwa sekuqediwe, sizothola isithonjana sayo kufayela lethu le- ikhabethe lezinhlelo zokusebenza ezifakiwe, uma singalitholi, sizolifinyelela sisebenzisa injini yokusesha ye-emulator. Khumbula ukuthi uhlelo lokusebenza lwenzelwe omakhalekhukhwini ngakho-ke lungahle lube namanye amaphutha ukulisebenzisa ku-emulator yekhompyutha.
Lezi zinkomba zisebenza kuwo womabili amakhompyutha ane-Windows operating system kanye namakhompyutha anohlelo lokusebenza lwe-MacOS.
Izinhlelo Zokuthakazelisa ze-Android Zokulingisa ku-PC
Kunezinhlelo zokusebenza eziningi ezithokozisayo noma imidlalo esingayitholi kukhompyutha yethu, kepha ukuthi singalingisa ngaphandle kwezinkinga ngeBluestacks, sizokhuluma ngokunye okuthakazelisa kakhulu.
Umhleli wesithombe esimnandi ozokwenza izithombe zethu ezindala zibukeke njengezamanje kakhulu ezithathwe ngamakhamera wesimanje kakhulu, uhlelo lokusebenza olunomsebenzi wokuhlanza izithombe zethu ezifiphalisiwe noma ezinamaphikseli ukuthi sigcina kusuka lapho ama-mobiles ayengeyona lokhu ayikho manje.
Umphumela uyamangaza, Yize zizobukeka njengezithombe ezinhle kunazo zonke esizithatha namhlanje, zizonikeza ukuphakanyiswa okujwayelekile kwazo zonke lezo zithombe esingafuni ukuzilahla kepha akubonisi. Uma sinegalari enkulu yezithombe ezindala ebesikade sifuna indlela yokuzilungisa isikhathi eside, leli yithuba lethu futhi okuhamba phambili kukho konke ukuthi imahhala ngokuphelele ku-Android ngakho-ke nje kufanele siyifake siphinde siyithinte kabusha zonke lezo zithombe ngamunye ngamunye bese ugcine amakhophi ahleliwe kufolda.
Noma kukhona inguqulo yewebhu yeWhatsApp enemisebenzi eminingi, kuhlala kuncike esigungwini sethu futhi ayinayo yonke imisebenzi esiyithokozelayo kumafoni ethu, nenguqulo yayo ye-Android ye-emulator, sizojabulela uhlelo oluzimele ngokuphelele lwe-WhatsApp lapho singahlanganisa khona inombolo yocingo futhi senze amakholi wevidiyo nemisebenzi yayo ephelele ngaphandle kwenkinga.
Lolu hlelo lokusebenza oludumile ukuphoqa ngokusebenzisa izinkundla zethu ezizithandayo, ukuba nazo zonke ziqoqwe ndawonye nohlelo lwayo lokuthumela imiyalezo oluzimele, kungenye yalezo zinhlelo esingajabulela nge-emulator ye-Android. Ngaphezu kokulandela izinkundla zethu esizithandayo, futhi kusivumela ukuthi silayishe izithombe futhi sibe nezixwayiso wabo bonke ngaso leso sikhathi ngokusebenzisa izaziso zohlelo lokusebenza.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Ungayilanda Kanjani iPhotomath ye-PC Mahhala (inguqulo yakamuva)